Indawo yokuhlala yolwandle i-N13 Golem
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEasy
Le ndlu inamagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela kunye ne-balcony. Nceda ujonge iifoto. Igumbi lokulala lokuqala linebhedi ephindwe kabini, kwaye igumbi elilandelayo lineebhedi ezintathu ezingatshatanga njengoko kubonisiwe. Igumbi lokuhlala linebhedi yesofa kwaye inokuguqulwa ibe yibhedi ephindwe kabini. Lo mhlaba umalunga neemitha ezingama-30 ukusuka elunxwemeni kwaye malunga neemitha ezingama-500 ukusuka kwindlela esecaleni yendlela. kufutshane nehlathi elincinci kunye neRestaurant Perla, apho utya ukutya okwenziwa ekhaya
Ime eGolem, esecaleni lolwandle i-N13 Golem ibonelela ngendawo yokuhlala enebalcony kunye neWiFi yasimahla.
Yenziwe ngamagumbi okulala ama-2, eli khaya leholide linegumbi lokuhlambela eli-1 eline-bidet, ishawa kunye nesomisi seenwele.
I-Tirana yi-44 km ukusuka kwikhaya leholide, ngelixa i-Durres i-13 km kude. Isikhululo seenqwelomoya esikufutshane sisikhululo seenqwelomoya iTirana International, eMother Teresa, iikhilomitha ezingama-40 ukusuka kwiApartment yoLwandle iN13 Golem.
Lo mhlaba umalunga neemitha ezingama-30 ukusuka elunxwemeni kwaye malunga neemitha ezingama-500 ukusuka kwindlela esecaleni yendlela. kufutshane nehlathi elincinci kunye neendawo zokutyela, kwanebala lokudlala labantwana
Umbuki zindwendwe ngu- Easy
Sifumaneka ngalo lonke ixesha, nkqu nomncedi ukhona ukuba uyafuneka